रविभवन दुर्घटनाको पाठ : गल्ती नभएको सवारीलाई पनि कारवाही गरिरहने कि ऐनमा संशोधन गर्ने ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/रविभवन दुर्घटनाको पाठ : गल्ती नभएको सवारीलाई पनि कारवाही गरिरहने कि ऐनमा संशोधन गर्ने ?
गत शुक्रबार काठमाडौंको रविभवनमा कार र मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा मोरङको बेलबारी निवासी मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भयो । दुर्घटनापछिको सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत नै प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न कार चालकलाई शुक्रबारदेखि नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।
तर, रविभवन दुर्घटनाको सीसीटिभी फुटेज हेर्ने हो भने त्यहाँ कार चालकको भन्दा मोटरसाइकल चालककै गल्ती देखिन्छ । कलंकीबाट कालीमाटीतर्फ आइरहेको कारमा कालीमाटीबाट कलंकीतर्फ गइरहेको मोटरसाइकलले नियन्त्रण गुमाएर आफ्नो लेन नै छाडी अर्कै लेनमा पुगेर ठक्कर दिएको छ । ठक्करलगत्तै तीब्र गतिमा रहेको मोटरसाइकल क्षतविक्षत भएको देखिन्छ भने रोक्ने क्रममा कारसमेत सडक पेटीमा रहेको रेलिङमा ठोक्किन पुग्छ ।
दुर्घटनापछि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मोटरसाइकलको गति अत्याधिक तीब्र रहेको देखिन्छ । रविभावनकै एक गल्लीबाट एउटा मोटरसाइकल निस्किएपछि उक्त मोटरसाइकललाई छली अर्को लेनमा पुगेको मोटरसाइकल आफ्नो लेनमा फर्कनै सक्दैन । प्रहरीका अनुसार उक्त मोटरसाइकलको गति करिब ८० किलोमिटर प्रतिघण्टामा रहेको छ ।
कोरोनाले लियो कांग्रेस नेता तेजबहादुरको ज्यान
बाबुरामलाई गिरीको च्यालेन्ज – ‘सक्ने भए ओली-प्रचण्ड-देउवा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनु’
Breaking ..फेरि अर्को ब’ज्रपात भर्खरै अवतरण गर्दा गर्दै वि’मान दु’र्घटना